Sahan'ny fitiavana | Entprima Mozika sy bebe kokoa
Entprima Jazz Cosmonauts - Avoahana naoty, Famandrihana fanamarihana
Ny "Field of Love" dia mampiasa tsy tapaka ny endrika recitative sy aria. Ao amin'ireo andalan-teny roa, ny fitantaran'i Johann Sebastian Bach avy amin'ny St Matthew Passion dia voatonona ao amin'ireo fizarana miaraka aminy. Ny hira dia ara-panahy amin'ny lafiny iray satria ny fanantenana ho an'ireo tsy azo eritreretina ara-tsiansa dia nofaritana. Ny tiana hambara kosa dia ny lafiny mampihetsi-po amin'ny fanantenana ho mpifaninana amin'ny famoizam-po amin'ny fanararaotana ankizy. Ny fanararaotana ny ankizy dia heloka mahatsiravina amin'ny zanak'olombelona. Na fanararaotana ara-nofo, fampiasana miaramila ankizy na habibiana ara-tsaina hafa dia tsy misy fialan-tsiny amin'izany. Tsy misy afa-tsy fanantenana mamy sisa isika fa handresy amin'ny hazakazaka ny fitiavana.
Mandrosoa, manidina ao anatiny ary mahatsapa izany sehatry ny fitiavana izany
Tao amin'ny odyssey teny amin'ny habakabaka dia tonga teo amin'ny saha oscillating iray izay nahitana ny sehatr'asa iray manontolo izahay
Toa tsy nisy lalana intsony manodidina azy ary natahotra be izahay
Afaka nihaino ny feon-jaza nihira tsy an-kijanona izahay rehefa nifanakaiky kokoa.
Tsy tokony hatahotra ianao
Midira fa tsy handratra anao izahay
Eto dia miaina fanahin'ireo zaza iharan'ny fanararaotana izay tsy naniry afa-tsy ny fitiavana
Rehefa maniry zavatra mafy dia mafy ianao dia tonga amin'ny maha-izy azy
Ity no sehatry ny fitiavana
Miady amin'ny fiaraha-miory
Taorian'ny tantaran'ny "Spaceship Entprima”Sy ny seho an-tsehatra“ From Ape to Human ”, ny Entprima Jazz Cosmonauts afaka tamin'ny asa vaovao. Ny fanapahan-kevitra dia noraisina ho an'ny asa maharitra sy ara-tsosialy-politika - ny tolona hahazoana fiaraha-miory bebe kokoa eto amin'ity izao tontolo izao ity.
Ny fiaraha-miory dia tsy mirindra amin'ny fanavakavaham-bolon-koditra, fanavakavahana, tsy rariny, fitsiriritana ary zavatra ratsy rehetra ataon'ny olona. Ary rehefa miresaka ady isika, dia tafiditra ao ny fanoherana tapa-kevitra. Tsy avelantsika hiaina fiainana mandrakizay ny zanakay raha mamela ny tenantsika ho tonga mandrakizay ao anaty fiovam-pitiavana na fialam-bidy isika.
Na izany aza, ny olona rehetra dia mila mahay mandanjalanja ho an'ny fanahiny. Raha mamaly fankahalana amin'ny fankahalana isika dia tsy hahomby. Fa dia betsaka isika! Raha manao ny anjarany amin'ny fiainana andavan'andro ny tsirairay dia hanatsara ny zava-misy.
Ataovy azo antoka fa mijanona ho matanjaka hatrany amin'ny iraka ampanaovinao sy ialao ireo fifandonana manimba ny fanahinao.
Ny hevitra ny sahan'ny cosmic noforonin'ny faniriana ho tia ny fanahin'ireo ankizy niharan'ny herisetra dia nanomboka tamin'ny taona 1997 ary ampahany amin'ny tantaran'ny CD "Alltage" farany nataon'ny mpanakanto feo ary Horst Grabosch mpitsoka trompetra teo aloha.
Amin'ny odyssey manerana ny habakabaka dia tonga amin'ity cosmonauts ity izay tsy azo ihodivirana. Ny fanerena hisidina mamaky an'ity saha ity no antony manaparitaka ny toerana. Manova fiainana! Ny fiaraha-miory dia miova avy amin'ny safidy mankany amin'ny ampahany tsy azo ihodivirana amin'ny maha-olombelona.
Nefa hoy ny feon'ilay zaza hoe: “Tsy tokony hatahotra ianao, tsy hampijaly anao izahay!” Fanavotana izany ary antony manosika ara-panahy. Mampalahelo fa ny fanararaotana na inona na inona karazana dia lasa ampahany amin'ny ankamaroan'ny fivavahana rehetra, ka ny fiantsoana azy io ho antony ara-pinoana dia tsy azo iadian-kevitra.
Mazava ho azy, tsy kisendrasendra ny fisehoan'ilay hira fotoana fohy talohan'ny Paska, ary tsy kisendrasendra ihany koa ny filazan'ny mpitory avy ao amin'ny Bach's St Matthew Passion. Mbola tsy fifanandrifian-javatra fotsiny aza ny nahatongavan'ilay hira tao anatin'ny mozika pop ankehitriny.
Amin'ny fotoana lasa lamaody indray ny fandokoana ny mainty sy fotsy, dia zava-dehibe ny hianaran'ny olona hiaritra fanoherana miharihary indray. Ireo izay mihaino tsara kosa dia hahatsapa fa ny fifanoheran-dàlana dia tsy ny fombantsika ihany no mamorona azy, izay mahatonga ny fiainana ho mahantra kokoa noho ny mety.